We Fight We Win. -- " More than Media ": မက် ဇော် ဇော် နာမည် ခံထားတဲ့ တင်အောင်မြင့်ဦး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
မက် ဇော် ဇော် နာမည် ခံထားတဲ့ တင်အောင်မြင့်ဦး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး အနားယူတယ်ဆိုရင် မက်စ်ဇော်ဇော်နာမည်နဲ့သူရင်းနှီးမြု့ပ်နှံထားတဲ့ စီးပွားရေးတွေရှိတယ်။ မက်စ်ဇော်ဇော်ကိုနာမည်ခံပြီး
စာချပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ပေါင်း ၁၄ ခုရှိတယ်။ နာမည်ငှား စာချုပ် ( Benami) တွေလုပ်ထားတယ်လုို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
မက်စ်ဇော်ဇော် နာမည်ခံ သူပိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ၊ မြေယာများ၊ ဓါတ်ဆီဆိုင်များ၊
ဒါတွေဟာ နိင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်တယ်။ သမတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ရဲ့ လာဘ်စား ထား မှုတွေကို ဖေါ်ထုတ် အရေးယူ သင့်တယ်။
လွှတ်တော်အမတ် တွေ အနေနဲ့ ဒီကိစ ကို လွှတ်တော်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူသင့်တယ်။
Not only Max(Mad pig face)ZZ, but also other thieves who stuck every thing into their f#*%ing own asses.
Farmer Phoe Yar Zar Co.Ltd. Zin Htet Co.Ltd. They import Elephant cement and other building materials product from SCG, Thailand. They are the only company to sell the cement to MEC with 4600 Kyats per bag and total yearly sales volume is more than 100,000 Metric Ton. MEC distribute cement to GE project around the country.